Siyini leso simiso sisebenza ezincanyana kagesi diaphragm futha?
I-miniature kagesi diaphragm futha lusekelwa ngamandla micro DC motor (ngokuvamile 5V, 12V, 24V motor), okuyinto ushayela yangaphakathi mechanical kudivayisi ome njengeqanda ukwenza ezinyakazayo ome njengeqanda, kanye ezinyakazayo ome njengeqanda ushayela diaphragm yangaphakathi ukuba nathi simbonise wona. Ngakho-ke, emoyeni ekamelweni futha umthamo fixed onomfutho (echwebeni ukuncela ivaliwe lapho compressor ivulekile, echwebeni qeda ivulekile ukwakha ingcindezi kancane positive), futhi isandiso (echwebeni qeda ivaliwe lapho compressor kuyinto kwezikhalo ngasese, futhi imbobo ukuncela ivulekile ukwakha ingcindezi negative), kanti ukudonsa wenziwa. A ingcindezi umehluko ekhiqizwa phakathi echwebeni emoyeni futhi ngaphandle umfutho womoya. Ngaphansi isenzo umehluko ingcindezi, igesi is Umfutho (ukusivumela) ekamelweni futha akhishwe echwebeni qeda.
Uyini umehluko phakathi futha ukubuya futhi ingcindezi inkinobho futha?
Reflux lwemsebenti: I futha inezidingo impumuzo ingcindezi idivayisi yayo ukuchichima wesifunda. Lapho esitolo esidayisa amanzi ivaliwe futhi avaliwe, uketshezi kule futha amanzi uqala decompress ngokuzenzakalela bese ubuyela, ingcindezi ngaphakathi okuwukuphela kwepayipi lamanzi ngeke ukwandisa, futhi okuwukuphela kwepayipi lamanzi ngeke liqhume.
Ingcindezi inkinobho lwemsebenti: Ngemva ukuvula inkinobho kagesi, vula amanzi isibhamu switch, iqale ukusebenza, uvala inkinobho amanzi isibhamu, futha amanzi usike ngokuzenzakalelayo futhi ziyeke ukusebenza; bese uvule inkinobho amanzi isibhamu, futha amanzi iqala nge-othomathikhi ukusebenza. Ingcindezi futha ulungisa ngokuzenzakalela ingcindezi ngokuvumelana ubukhulu umlomo wombhobho.
Ngokuvamile, kunezinhlobo eziningi sprayers, kanye wokushintsha ingcindezi ngokuvamile kusetshenziswa emshinini ukuwasha izimoto. Bheka isimo sakho siqu bese ukhetha futha kwesokudla.
Kuyini kwenkululeko ukusetshenziswa DC amaphampu?
1, Ukukhiqizwa sprayers kagesi asetshenziswa kwezolimo.
2, Ukuxazulula ukusetshenziswa RV, yezikebhe, njll ukusetshenziswa ukudla, ukugeza, ukugeza, yangasese, amanzi okugeza kuwo.
3, Izimoto, phansi nezinye izinto yokuhlanza
4, Ukudla, isiphuzo ukucutshungulwa kanye processing imishini.
5, Amanzi umndeni.
6, The umkhakha welanga.
7, imishini ehlanza amanzi umkhakha.
8, Okunye imishini futhi izinhlelo ezidinga ukudluliselwa ketshezi, umjovo ngisho metering
Yiziphi amaphutha ezivamile nezindlela zokuxazulula inkinga ngoba knapsack sprayers kagesi?
Ezinganele spray ingcindezi, atomization abampofu: Uma valve amanzi ibhola siphakeme ngu ukungcola, valve itheku angasuswa phakathi kweempundu angasuswa ngendwangu; uma lesi sitsha lilimele, indebe amatjha angabekwa ngokulandelana ukusuka esikhundleni; uma ilunga ayifakiwe ukubekwa uphawu ukhalise, noma avuzayo ngenxa ukulimala iringi kubekwa uphawu, ingafakwa noma ushintshwa ngomunye.
Sishaye ingeyona inkungu: Uma imbobo ezigobile umzimba umlomo wombhobho ivinjelwe ukungcola, emgodini enalokho kuthambekela kungenziwa dredged; uma wokuhlanza umlomo wombhobho imbobo kungenziwa zezikhali ngenxa ukuvaleka umlomo wombhobho imbobo, kanzima into orifice ezifana wire noma ithusi inaliti ingasetshenziswa hhayi ukuvimbela imbobo kusukela uyanda. Ukuze wenze izinga spray sibi; uma isihlungi ku bezinhlamvu ivimbekile noma ibhola imiswe okwesikhashana ngo-valve yamanzi, lemifanekiso kufanele ahlanze futhi enenhlabathi ibhola kufanele ahlanze.
Inkinobho noma ukuvuza alinyakazi: Uma inkinobho cap akusilo some, qinisa inkinobho cap; uma Washer phezu inkinobho core othwala, esikhundleni Washer; inkinobho asisho ukunyakazisa, ngoba ibekwe isikhathi eside, noma usebenzise isikhathi eside kakhulu, inkinobho Umnyombo is banamathela yi etch ye-ejenti, kanye izingxenye kufanele kususwe ngokwephula wokuhlanza e kaphalafini noma uwoyela diesel; uma kunzima ukususa, kungashiwo egxilile uphalafini phakathi nenkathi ethile yesikhathi, bese zisuswe futhi basuswa, futhi izinto kanzima ingasetshenziswa yini.
Amanzi ukuvuza kulelo nalelo ngokuhlanganyela: Uma Ilunga kulapho okuxekethile, qinisa nut; uma gasket is hhayi isicaba noma ilimele, gasket kufanele isicaba noma gasket esikhundleni; uma gasket is lukhuni ukuncipha, kungashiwo washintsha ngo uwoyela isilwane ngaphambi kokusetshenziswa.
Indlela hlola yokuhlanza umphumela ezifuywayo ophezulu wezindlu?
Ngemuva kokusebenzisa wezindlu ephezulu kwengcindezi amanzi ephezulu ingcindezi jet yokuhlanza, sagcina ufuna ukwazi indlela yokuhlanza umphumela isebenza. Lokhu kudinga ukuhlolwa ke, indlela ukuhlola yokuhlanza umphumela ophezulu wezindlu emva ukuhlanza? Kukhona izindlela eziningana, okuyizinto:
(1) okungahleliwe amasampuli indlela
Lolu hlobo ukuthola indlela kufanelekile yokuhlanza letigcogcwe ngaphambilini nzima kakhudlwana. Ngenxa isikhathi, asikwazi ukuhlola yokuhlanza letigcogcwe ngaphambilini ngamunye ngamunye. Ngalesi sikhathi, sivamile kudingeka nemiyalezo kukhishwe ngabanye yokuhlanza izinto zokuhlola. Umphumela ukunquma ekuhlanzekeni zonke yokuhlanza izinto. Isidingo ukuba banake ukusetshenziswa le ndlela ukuze ukhethe inani elithile ukuhlolwa ukubonakalisa ngokunembile isimo jikelele.
(2) Ukulinganisa nge izingxenye angcoliswe kakhulu njengoba izinga ukuhlolwa
Lapho sisebenzisa le ndlela ukuhlolwa, uma izingxenye angcoliswe kakhulu Usufike ezingeni edingekayo lokuhlanzeka, ke yokuhlanza umphumela kwezinye izingxenye nge ukusilaphazeka komoya okungako obungathi sina singalimaza ngokuvamile nezidingo nokuhlanzeka.
(3) Ukuhlolwa Special ngokudlulisa ethize
Le ndlela Ukuthola ukukhetha ukungcola ezinethonya kunazo esisetshenziswayo. I jikelele izingxenye mechanical kuthiwa degreased futhi bahlanza. Le ndlela kufanelekile. Ngalesi sikhathi, wasebenzisa indlela yamaRoma yokubusa isivivinyo kuyinto ukungcola oily ngaphandle ukuthola ezithile nezinye udoti. Le ndlela yokuhlola Ungahlola nokuhlanzeka into ukuba zihlanzwe.
Through the isingeniso ngenhla, singabona ukuthi kunezindlela eziningi ukuthola yokuhlanza umphumela vacuum ingcindezi eziphakemeyo. Ungakhetha indlela ukuthola ngokwesayensi ngokwendlela isimo esithile.
Imoto Ukugeza Machine , High-Pressure Pump , ephathekayo Car Ukugeza Machine , Four Point Pump ,